Ukuhamba ngokusebenzisa i-labyrinth yeSchonbrunn Palace | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukuhamba udabula i-labyrinth yeSchonbrunn Palace
Enye yezinto okumele ibonwe eVienna yinhle futhi inhle Isigodlo saseSchonbrunn. Ukuvakasha kuhlala kukuhle futhi kunzima ukucabanga ukuthi kungaba njani ukuhlala uzungezwe yingcebo eningi emhlabeni lapho kwakukhona abacebile nabampofu kuphela. Akukho lutho phakathi.
Lesi sigodlo ekuqaleni sasiyindawo yokuzingela kanye nokuhlala ehlobo kobukhosi bakwaHabsburg, nangaphezulu kobuhle nobuhle baso izingadi zinhle futhi futhi singadlula kuzo. Ikakhulukazi manje njengoba sekuyihlobo futhi ukuhamba kungaba mnandi kakhulu. Lapha kulezi zivande ukucasha kwengadi okuyi-Irrgarten noma okukhohliwe, enhle maze luhlaza okotshani.
I-maze yangempela eluhlaza Yabhidlizwa ngo-1892. Kuze kube yileso sikhathi kubonakala sengathi izintokazi zasenkantolo nabanye abantu bebehlangana phakathi, enhliziyweni ye-labyrinth, ukuba nemihlangano yokuziphatha okuhle okungabazekayo. Wanyamalala ezinhlelweni isikhathi eside kwaze kwaba othile weza nokumbuyisa empilweni yakhe ngonyaka we-1989. Ngakho-ke, kwatholwa amapulani okuqala, i-labyrinth yadwetshwa ngo-1686, yabe seyakhiwa kabusha.
Iqiniso yilokho I-labyrinth yezingadi zeSchonbrunn Palace ziyinkimbinkimbi impela ukuqeda ngempumelelo. Ngikuphonsela inselelo yokuthi uzame.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuhamba udabula i-labyrinth yeSchonbrunn Palace